132s Ihe kpatara ndị Republican anọ a ji emegide akwụkwọ mkpali coronavirus nke Senate images and subtitles
-Eme ka ala-ayi wu ugwu nke oru. Ihe ụgwọ a na-eme, na-enweghị idozi ya, ọ bụ naanị na-ekwu na ị ga-enwetakwu ego site n ’ebe enweghi oru karịa ka ị nwere ike mgbe ị na-arụ ọrụ. Nke ahụ bụ mkpali na-emebi emebi. Anyị enweghị ike ịgba ndị mmadụ ume ịghara ịrụ ọrụ na ịkpata ego kama ịlaghachi ọrụ ma nweta ụgwọ ọrụ gị. -Akwụ ụgwọ a, $ 600 ịkwụ ụgwọ n'elu uru steeti n’ezie na-enye ndị mmadụ ohere ịkpata ego ha ji okpukpu abụọ karịa n'ọnọdụ ụfọdụ. Achọrọ m inyere ndị mmadụ aka. Achọrọ m ijide n'aka na, ọ bụrụ na a hapụ gị n'ọrụ, na anyị na-ekpuchi ụgwọ ọrụ gị. Mana n'okpuru ụgwọ a, ị na-enweta $ 23.15 kwa elekere, dabere na izu ọrụ ọrụ 40, ọ bụghị ịrụ ọrụ. - Nke a bụ arụmụka banyere ma ọ bụ na ọ bụghị anyị ga-ahapụ ka ụgwọ edere nke ọma kụtuo mba a nsogbu ka ọnwa ndị na-abịa site n'amaghị ama amụba enweghị ọrụ. Nke ahụ bụ ihe arụmụka a bụ. Yabụ, anyị chọrọ ime ihe dị mfe. Anyị chọrọ idozi ihe mebiri ebe a site n’ikwu na uru mkpuchi akwụghị ụgwọ na-erite uru ekwesịrị ịdị na 100% nke ịkwụ ụgwọ tupu ị nweghị ọrụ. Nke a abụghị naanị maka ndị etinyela n'ọrụ na enweghị ọrụ. Nke a bụ maka ndị a ga - eme ka enweghị ọrụ n'ime izu ndị na-abịanụ. Mmeghari a niile na-ekwu na anyị na-eme ntuli aka n'ime nkeji ole na ole bụ na anyị kwesịrị itinye uru na enweghị ọrụ na 100% ụgwọ ọrụ ị na-anata ka ị na-arụ ọrụ. - Kweta ụgwọ a, dịka edepụtara ya ugbu a, gọọmentị ga-akwụ ọtụtụ ndị America ụgwọ ọzọ isonye na enyemaka gọọmentị karịa ka ha ga - eme ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ ha mgbe niile. M na-akwado ịgbasa mmemme mkpuchi enweghị ọrụ. Ọ bụ ụzọ kachasị mma na ngwa ngwa iji nweta ego n’ebe ndị ọ kacha mkpa nọ. Mana anyị ekwesịghị ịmepụta usoro ebe nkwenye mkpuchi enweghị ọrụ dị elu karịa ụgwọ ọnwa. Anyị enweghị ike ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ ọrụ ka ha ghara ịrụ ọrụ. Nke a bụ echiche zuru oke.
Ihe kpatara ndị Republican anọ a ji emegide akwụkwọ mkpali coronavirus nke Senate
< start="0.1" dur="5.1"> -Eme ka ala-ayi wu ugwu nke oru. >
< start="5.2" dur="3.768"> Ihe ụgwọ a na-eme, na-enweghị idozi ya, >
< start="8.968" dur="4.366"> ọ bụ naanị na-ekwu na ị ga-enwetakwu ego >
< start="13.334" dur="2.534"> site n ’ebe enweghi oru >
< start="15.868" dur="3.033"> karịa ka ị nwere ike mgbe ị na-arụ ọrụ. >
< start="18.901" dur="4.433"> Nke ahụ bụ mkpali na-emebi emebi. >
< start="23.334" dur="5.367"> Anyị enweghị ike ịgba ndị mmadụ ume >
< start="28.701" dur="3.432"> ịghara ịrụ ọrụ na ịkpata ego >
< start="32.133" dur="5.167"> kama ịlaghachi ọrụ ma nweta ụgwọ ọrụ gị. >
< start="37.3" dur="2.534"> -Akwụ ụgwọ a, $ 600 ịkwụ ụgwọ >
< start="39.834" dur="2.1"> n'elu uru steeti >
< start="41.934" dur="3.4"> n’ezie na-enye ndị mmadụ ohere ịkpata ego ha ji okpukpu abụọ karịa >
< start="45.334" dur="1.733"> n'ọnọdụ ụfọdụ. >
< start="47.067" dur="1.2"> Achọrọ m inyere ndị mmadụ aka. >
< start="48.267" dur="2.866"> Achọrọ m ijide n'aka na, ọ bụrụ na a hapụ gị n'ọrụ, >
< start="51.133" dur="2.334"> na anyị na-ekpuchi ụgwọ ọrụ gị. >
< start="53.467" dur="4.9"> Mana n'okpuru ụgwọ a, ị na-enweta $ 23.15 kwa elekere, >
< start="58.367" dur="3.2"> dabere na izu ọrụ ọrụ 40, ọ bụghị ịrụ ọrụ. >
< start="61.567" dur="2"> - Nke a bụ arụmụka banyere ma ọ bụ na ọ bụghị >
< start="63.567" dur="2.633"> anyị ga-ahapụ ka ụgwọ edere nke ọma >
< start="66.2" dur="3.467"> kụtuo mba a nsogbu ka ọnwa ndị na-abịa >
< start="69.667" dur="3.8"> site n'amaghị ama amụba enweghị ọrụ. >
< start="73.467" dur="1.7"> Nke ahụ bụ ihe arụmụka a bụ. >
< start="75.167" dur="1.866"> Yabụ, anyị chọrọ ime ihe dị mfe. >
< start="77.033" dur="2"> Anyị chọrọ idozi ihe mebiri ebe a >
< start="79.033" dur="2.634"> site n’ikwu na uru mkpuchi akwụghị ụgwọ na-erite uru >
< start="81.667" dur="2.4"> ekwesịrị ịdị na 100% >
< start="84.067" dur="2.5"> nke ịkwụ ụgwọ tupu ị nweghị ọrụ. >
< start="86.567" dur="3.267"> Nke a abụghị naanị maka ndị etinyela n'ọrụ na enweghị ọrụ. >
< start="89.834" dur="2.6"> Nke a bụ maka ndị a ga - eme ka enweghị ọrụ >
< start="92.434" dur="1.5"> n'ime izu ndị na-abịanụ. >
< start="93.934" dur="3.4"> Mmeghari a niile na-ekwu na anyị na-eme ntuli aka n'ime nkeji ole na ole >
< start="97.334" dur="2.467"> bụ na anyị kwesịrị itinye uru na enweghị ọrụ >
< start="99.801" dur="4.332"> na 100% ụgwọ ọrụ ị na-anata ka ị na-arụ ọrụ. >
< start="104.133" dur="1.867"> - Kweta ụgwọ a, dịka edepụtara ya ugbu a, >
< start="106" dur="1.767"> gọọmentị ga-akwụ ọtụtụ ndị America ụgwọ ọzọ >
< start="107.767" dur="1.7"> isonye na enyemaka gọọmentị >
< start="109.467" dur="2.434"> karịa ka ha ga - eme ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ ha mgbe niile. >
< start="111.901" dur="3.7"> M na-akwado ịgbasa mmemme mkpuchi enweghị ọrụ. >
< start="115.601" dur="2.399"> Ọ bụ ụzọ kachasị mma na ngwa ngwa iji nweta ego >
< start="118" dur="2.133"> n’ebe ndị ọ kacha mkpa nọ. >
< start="120.133" dur="1.801"> Mana anyị ekwesịghị ịmepụta usoro >
< start="121.934" dur="2.066"> ebe nkwenye mkpuchi enweghị ọrụ >
< start="124" dur="2.334"> dị elu karịa ụgwọ ọnwa. >
< start="126.334" dur="3.133"> Anyị enweghị ike ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ ọrụ ka ha ghara ịrụ ọrụ. >
< start="129.467" dur="1.501"> Nke a bụ echiche zuru oke. >